Ukukhiqiza: izinsuku zokusebenza ezingama-25
Ukuhanjiswa komhlaba jikelele: ngesiqukathi
Uhlelo lwethu lwendlu yangasese olunomshini
ingaxazulula lezi zinkinga ohlangabezana nazo
Kulula ukuba yiqhwa
Isixazululo-Ngoba ithoyilethi elinemvelo elinomusa limunca ukungcola ngengcindezi yomoya, ipayipi lendle eliqinile lingafinyelela esimweni esithi "akukho manzi", okungeziwe, ukwambiwa kwesibili kuncike kwipayipi lokungena kwamanzi nepayipi lendle, eliqinisekisa ngokuphelele ukuthi indlu yangasese isendaweni ebandayo (-40 ℃) imvelo ingasebenza ngokujwayelekile.
Akukho ukungena kwamanzi
Isixazululo-Kukhona ithangi lokugcina amanzi elingu-1.5 m3 ohlelweni, futhi ukusetshenziswa kwamanzi kwendlu yangasese evumayo ngemvelo kungaphansi kuka-0.5L / isikhathi, kungasetshenziswa izikhathi ezingama-3000-4000.
Njengoba ithoyilethi elinobungani bemvelo lisebenzisa amanzi amancane futhi linokungcola okuqinile okuncane, asikho isidingo sokwakha ichibi elikhulu lendle lokuqoqa imfucuza. Kungafakwa ithangi elincane le-3m3 ekamelweni, elingahlangabezana nezikhathi zokusetshenziswa ezingama-3000-4000.
Ukungabi namanzi noma kunzima ukuwahlanza
I-Solution-Intelligent isilawuli kude nesikhathi sangempela kohlelo lokuphakelwa kwamanzi lwangaphakathi kanye nohlelo lokuqoqwa kwendle lwendlu yangasese ngayinye. Lapho ukutholakala kwamanzi kunganele noma ithangi lendle selizophuphuma, uhlelo luzozenzakalela i-alamu. Ezindaweni lapho izindlu zangasese zomphakathi zihlakazeke kakhulu, kulula ukuphathwa kwezindlu zangasese.
Udinga ukuhanjiswa njalo
Isixazululo-Njengoba imishini yohlelo lwendlu yangasese ihlanganiswa nomzimba wegumbi, indlu yangasese ihamba kakhulu futhi kulula ukuyiphatha
Udinga indawo efakiwe ibe nomthambeka
Isixazululo-Njengezindlu zangasese zokuhlanza zisebenzisa ingcindezi engemihle ukuze zibe umthombo wamandla. Inqubo yokufakwa kwepayipi ingalandela ingaphandle lesakhiwo, ulayini wangaphakathi, ugobile, futhi ngisho nezikhombisi eziya phezulu naphansi. Kuyabonakala ngempela ukuthi "amanzi agelezela phezulu"